Ụbọchị My Pet » 5 Echiche Ụgha dị dịwara Nke Onye ọ bụla na-eche bụ eziokwu
emelitere ikpeazụ: Apr. 05 2020 | 3 min agụ
Site sitcoms ka ihunanya comedies ka akụkọ site n'aka ndị enyi, anyị nile maara ụfọdụ n'ime ala-kwetara eziokwu banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Otú ọ dị, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị ọtụtụ n'ime ndị a “eziokwu” na-ezighị ezi. Ya mere, ị maara n'ezie na-erughị banyere romance karịa ka i chere na i mere, ruo ugbu a.
Echiche Ụgha #1: Gamers owu na-ama na-amaghị nwoke.
Site Hollywood, Anyị niile maara “nerdy gamer mgbe metụrụ a boob” echiche. More otú, mgbe anyị na-anụ okwu gamer, anyị na-eche na nke a dị nnọọ mkpa ma ọ bụ abụba onye romance mejupụtara Xbox chats aa na ha nna na-Re. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị, ndị a nerdy gamers yikarịrị ka pụọ ​​na ụbọchị karịa ndị na-abụghị gamers. Ọzọ, na-eto eto egwu egwuregwu ahịa na mgbakwunye na nke ịrị elu na egwuregwu ọtụtụ, Ịgba Cha Cha n'ezie na-a na-ewu ewu ice na-emebi. Ọzọkwa, , ka anyị ghara ichefu banyere online egwuregwu ebe ndị mmadụ zutere na dara na ịhụnanya.
Echiche Ụgha #2: Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-abụghị nanị a ikpeazụ resotu ma na ọ bụ naanị na-adọta losers.
O di nwute na, ruru sikwara ike njite ahịa mgbalị na mgbakwunye na-adịghị ekwu eziokwu profaịlụ, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị enwetatụbeghị a ọjọọ rap n'ihi na afọ. A, n'ime uche anyị ọ na-eme dị ka ndị ikpeazụ okporo mmiri mgbalị ịchọta mkpụrụ obi gị na onye òtù ọlụlụ; Otú ọ dị, ndị a echiche na-ezighị ezi. E nwere na-adịbeghị anya ọmụmụ gosiri na otu onye n'ime ise mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na ọrụ na-mkpụrụ obi ha ma ọ bụ nwunye online. Ọzọkwa, 94% nke ndị na-ike a mmekọrịta online ga-apụ na a abụọ ụbọchị, nke bụ ihe karịrị pasent nke ndị izute offline. Ntak emi? N'ihi na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ site a na kọmputa, ndị na-achọkarị ihe n'eziokwu na ndị na ụgwọ n'ihu dị ka ha na- “na-ekwu okwu na kọmputa”. Chee echiche banyere ya, ị ga-Nchoputa gị ikike idi na onye ị dị nnọọ zutere na a mmanya? Ọzọ oké ihe mere online ụbọchị bụ na ọ bụ onwe-nkwado ma na-esiwanye na-ewu ewu. Ohere na ị ga-onye nwere gị otu ọdịmma dị nnọọ elu.
Echiche Ụgha #3: Na mmekọrịta, ndị inyom obi na ndị ikom na-ezi uche.
Anyị na-niile hụrụ imerime fim na-egosi na akaụntụ maka inyom bursting ákwá n'elu a Ihọd ma ọ bụ ịtụle mmekọrịta ahụ mgbe nwoke-egosi na-amaghị na suave mgbe mgbe na-emeri nwaanyị obi. Science kwuru na ndị ikom na-ọzọ n'ụzọ mmetụta uche na-emetụta mmekọrịta ejije karịa ndị inyom, ha dị nnọọ adịghị egosi ya. Women n'ozuzu agbasaghị nwere nso nkekọ ezinụlọ na ndị enyi ohere maka otutu nkwado mmetụta uche karịsịa mgbe ọ na-abịa Ihọd nsogbu. Ụmụ okorobịa na-dị nnọọ ịkọrọ ibe ha na-eme ka a ọgụ karịsịa ike na ha.
Echiche Ụgha #4: Feminism egbu romance.
Na echiche na feminists bụ onwe ndị inyom na-adịghị mkpa a mmekọrịta ma ọ bụ mmadụ iji wuchaa ha na-strung ofụri ọtụtụ ọgbọ, ọ bụ n'ezie na-ezighị ezi. Ụmụ nwanyị ndị na-ewere onwe ha feminists bụ karịa bụghị a heterosexual mmekọrịta. Ndị ikom na-na-lụrụ a feminist kọrọ na ha mmekọahụ ndụ ọzọ bụ afọ ojuju karịa ndị na-abụghị. Ya mere mgbe feminists na-Elezie hụrụ ka flannel, mannish inyom na bụ n'ezie bụghị ikpe.
Echiche Ụgha #5: Di na nwunye ndị na-ebi ndụ ọnụ tupu alụmdi na nwunye dị mma njikere.
Society kpaliri n'ebe eziokwu ahụ bụ na di na nwunye na-alụbeghị di na-a ebe ọnụ na-ebi ndu n'ime nmehie. Ma n'oge ọ fọrọ nke nta na-eme ka uche. Ọ na-egosi ezi uche ịkwaga na gị ịrịba ama ndị ọzọ n'ihu na-eme a iwu nkwa na ike ejedebe na ịgba alụkwaghịm. Ụzọ a, i nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na Mr. Right bụ n'ezie Mr. Right. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị, di na nwunye ndị bi ọnụ tupu alụmdi na nwunye ma ọ bụ aka nwere elu ịgba alụkwaghịm na ala di na nwunye afọ ojuju. Di na nwunye na-egwu n'ụlọ ahụ tupu njikọ aka na-karịsịa na-aga ibibi ma ọ bụrụ na ha na-eme ya iji nwalee ha na mmekọrịta ha. Ọ bụrụ na ị na-eche dị ka na-anwale onye gị na mgbe ahụ Ohere inweta bụ na ị bụghị na nri onye. Ihe ọzọ na-pụrụ ịbata play bụ echiche nke na-edozi. Di na nwunye, n'oge, na-emeso ndụ ọnụ dị ka nzọụkwụ ọzọ na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị usoro. Ozugbo ha na-amalite ndụ ọnụ, ha na-ahụ na ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume na-agbaji elu dị ka ego na n'ụzọ mmetụta uche na ha biri.
Ma e nwere na ị nwere ya, ugbu a ị maara ihe banyere romance.